Ferdinand warbaahinta horteeda ugu hanjabay macallinka Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer kaddib guuldarradii xalay kasoo gaartay Young Boys – Gool FM
(Manchester) 15 Sebt 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa xalay guuldarro lama filaan ah ay kasoo gaartay naadiga Young Boys kulan ka tirsanaa wareegga guruubyada Champions League.
Kaddib natiijadaas, difaacii hore ee Red Devils, Rio Ferdinand ayaa warbaahinta horteeda cannaan iyo digniin ugu jeediyay macallinka haatan ka arrimiya qolka lebiska Old Trafford ee Ole Gunnar Solskjaer isagoo u sheegay in la ceyrin doono haddii uu koob ku guuleysan waayo.
“Dhammaan macallimiinta u dagaallameysa afarta sare, Ole wali ma uusan muujin inuu wax ku guuleysan karo heerka” ayuu halyeyga Man United u sheegat BT Sport.
“Waxa uu heystaa saf uu isaga sameystay, isagu uu qaabeeyay, suuq cajiib ah ayaa usoo dhammaaday, waxaana uu keensaday guuleystayaal iyo dad baddeli kara dabciga kooxda.
“Haatan si qumman ayaa loo xukmin doonaa, hadda waa inaad shaqada koobab u baddeshaa, haddii uusan sameynna shaqadiisa ayuu ku weyn doonaa sida macallimiinta kale” ayuu ku gooddiyay xiddigii hore ee xulka qaranka Ingiriiska.
Ferdinand iyo Ole Gunnar Solskjaer ayaa usoo wada ciyaaray naadiga reer England waayahooda ciyaareed, haatan ninka reer Norway ayaa majaraha u haya kooxdiisii hore, halka difaacii mayalka adkaa uu noqdo falanqeeye kubada cagta.
Si kastaba ha ahaatee, Manchester United ayaa xagaagan lasoo saxiixatay xiddigo waaweyn sida Ronaldo, Raphael Varane iyo Jadon Sancho, hase ahaatee, guuldarro ayay la kowsatay ole’olaheeda Champions League kaddib markii gool uu dhaliyay Cristiano Ronaldo loogu baddelay labo gool oo daqiiqadahii dambe ee ciyaarta yimid inkastoo uu qaybtii hore casaan qaatay Aaron Wan-Bissaka kaasoo laga saaray ciyaarta.